စပေ့အက်ခ်စ် ဒရာဂွန် - ဝီကီပီးဒီးယား
၄,၂၀၁ ကီလိုဂရမ် (၉,၂၆၂ ပေါင်)
to ISS ၆,၀၀၀ ကီလိုဂရမ် (၁၃,၀၀၀ ပေါင်), which can be all pressurized, all unpressurized or anywhere between. It can return to Earth ၃,၅၀၀ ကီလိုဂရမ် (၇,၇၀၀ ပေါင်), which can be all unpressurized disposal mass or up to ၃,၀၀၀ ကီလိုဂရမ် (၆,၆၀၀ ပေါင်) of return pressurized cargo
၁၀ ကုဗမီတာ (၃၅၀ ကုဗပေ) pressurized
၈ ဒီဇင်ဘာ ၂၀၁၀; ၁၁ နှစ် အကြာက (၂၀၁၀-၁၂-08)
၂၂ မေ ၂၀၁၂; ၉ နှစ် အကြာက (၂၀၁၂-၀၅-22)
စပေ့အက်ခ်စ်_ဒရာဂွန် ၂ →
ဒရာဂွန် ပျံသန်းရေး ဆော့ဖ်ဝဲလ်
စပေ့အက်ခ်စ် ဒရာဂွန် (SpaceX Dragon) သည် အမေရိကန်ပြည်ထောင်စု ကယ်လီဖိုးနီးယားပြည်နယ်တွင် တည်ရှိသည့် စပေ့အက်ခ်စ် (SpaceX) အာကာသ သယ်ယူပို့ဆောင်ရေး ကုမ္ပဏီမှ ဒီဇိုင်းရေးဆွဲ တည်ဆောက်ထားသော အာကာသယာဉ် တစ်စင်းဖြစ်သည်။ စပေ့အက်ခ်စ် ဒရာဂွန်ကို ၂၀၁၀ ခုနှစ် ဒီဇင်ဘာလ ၈ ရက်နေ့တွင် ဖယ်လ်ကွန် ၉ (Falcon 9) ဒုံးပျံဖြင့် လွှတ်တင်ခဲ့ပြီး ၎င်းသည်လည်း ပုဂ္ဂလိက ကုမ္ပဏီမှ လွှတ်တင်သော ပထမဆုံး အာကာသယာဉ် ဖြစ်သည်။
↑ SpaceX Dragon specs။ 12 April 2017 တွင် မူရင်းအား မော်ကွန်းတင်ပြီး။ 15 September 2021 တွင် ပြန်စစ်ပြီး။
↑ Tarajevits၊ Thomas။ Revisions to What computer and software is used by the Falcon 9?။ Space Exploration Stack Exchange။ Tarazevits says in his comment that he learned those information at "Engineer the Future" session with Jinnah Hussein.
↑ We are SpaceX Software Engineers - We Launch။
↑ Bates၊ Daniel (9 December 2010)။ Mission accomplished! SpaceX Dragon becomes the first privately funded spaceship launched into orbit and guided back to earth။ Daily Mail။9December 2019 တွင် ပြန်စစ်ပြီး။
ဤ အာကာသ သို့မဟုတ် အာကာသပျံသန်းရေးနှင့် သက်ဆိုင်သော ဆောင်းပါးမှာ ဆောင်းပါးတို တစ်ပုဒ်ဖြစ်သည်။ ဖြည့်စွက်ရေးသားခြင်းဖြင့် မြန်မာဝီကီပီးဒီးယားကို ကူညီပါ။
"https://my.wikipedia.org/w/index.php?title=စပေ့အက်ခ်စ်_ဒရာဂွန်&oldid=686134" မှ ရယူရန်
ဤစာမျက်နှာကို ၂၁ စက်တင်ဘာ ၂၀၂၁၊ ၁၇:၀၇ အချိန်တွင် နောက်ဆုံး ပြင်ဆင်ခဲ့သည်။